Madaxweynaha Jamhuuriyadda Oo Caawa Ku Dhawaaqay Dagaal Weji Cusub Leh Oo Ay Dowladdu La Galeyso Al-Shabaab – idalenews.com
Kadib kulan gaar ah oo ay caawa gudiga amniga Qaranka ku yeesheen xarunta Madaxtooyada Qaranka ayaa Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxa uu si rasmi ah ugu dhawaaqay dagaal weji cusub leh oo ay Dowladdu la galeyso Maleeshiyada argigixisada ah ee Al-Shabaab.
Kulankan oo uu shirgudoominayey Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxaa goobjoog ka ahaa Gudoomiyaha Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari, Ra’isulwasaaraha Xukuumadda Mudane Cabdi Faarax Shirdoon (Saacid), Wasiirrada Gaashaandhigga iyo Arrimaha Gudaha iyo sidoo kale Taliyeyaasha Ciidammada Qalabka Sida.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Xasan Sheekh Maxamuud oo warbaahinta Qaranka la hadlay kulankaasi kadib ayaa ugu horeyn ka hadlay dhacdadii maanta ka dhacday dhismaha xarunta Maxkamadaha ee magaalada Muqdisho waxaana uu Madaxweynuhu uga tacsiyadeeyey umadda Soomaaliyeed guud ahaan iyo ehellada dadkii ku geeriyooday ficilka cadowga.
Tacsida kadib Madaxweynaha Jamhuuriyadda Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa tilmaamay in waxa ay ku kaceen argigixisadu ay yihiin kuwo ka fog Diinta Islamaanka iyo jiritaanka umadda Soomaaliyeed taasina adduunka lagala mid yahay, hasa yeeshee cidda cadowga uu u gaarsanayo ay yihiin shacbiga Soomaaliyeed oo aanay aheyn mas’uuliyiinta iyo Ciidammada Dowladda.
Hogaamiyaha dalka ayaa hoosta ka xariiqay in dhacdadii maanta ay ka turjumeyso heerka uu gaarsiisan yahay Jabka kooxda argigixisada ah ee Al-Shabaab, isagoo intaa raaciyey in aysan kooxdu awood u lahayn ka dagaallanka safafka hore hase yeeshee dowladda Soomaaliya ay dadajisneyo hirgelinta dagaal weji cusub leh kaasi oo lagu bur burinayo haraadiga argigixisada Al-Shabaab.
“Dowladda Soomaaliya waxa ay bilaabeysaa dagaal noociisu uu cusub yahay oo ka dhan ah jiritaanka Al-Shabaab, Taatikooyinkooda waa ay baddelleen, taallabada la qaadayana waxa ay noqon doontaa mid loo dhan yahay, Dowlad iyo Shacab” Ayuu hadalkiisu ku soo gabagabeeyey madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud.
Ugu dambeyntii Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku booriyey shacbiga Soomaaliyeed guud ahaan iney meel ugasoo wada jeesteen cadawgooda islamarkaana ay Dowladda ku gacan siiyaan sidii dagaalkan wejiga cusub leh loogu soo afjari lahaa jirintaanka haraadiga argigixisada.